BREAKING NEWS: अमेरिका बाट राष्ट्रपति ट्रम्पले कोरोना औषधि बन्यो भन्दै विश्वलाई दिए यस्तो खुसिको खबर ! – Sudursamaj
मुख्य पृष्ठबिश्व/प्रवासBREAKING NEWS: अमेरिका बाट राष्ट्रपति ट्रम्पले कोरोना औषधि बन्यो भन्दै विश्वलाई दिए यस्तो खुसिको खबर !
BREAKING NEWS: अमेरिका बाट राष्ट्रपति ट्रम्पले कोरोना औषधि बन्यो भन्दै विश्वलाई दिए यस्तो खुसिको खबर !
काठमाडौं – अमेरिकाको एक कम्पनीले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नि’ष्क्रिय पार्ने औषधि तयार पारेको दाबी गरेको छ । युनिभर्सिटी अफ पिटर्सवर्ग स्कूल अफ मेडिसिनका वैज्ञानिकहरुले कोरोना भा’इ’रस नि’ष्क्रिय पार्ने औषधिको विकास गरेको बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । सेल नामक जर्नलमा प्रकाशित लेखका आधारमा सो औषधिको विकासबारे अमेरिकाको समाचार संस्था फक्स न्यूजले समाचार तयार पारेको छ । *** पूरा विवरण को लागि तल क्लिक गर्नुहोला ***
वैज्ञानिकहरुका अनुसार यो औषधिले मान्छेमा कुनै साइड इफेक्ट नगर्ने र यसलाई निकै सानो बायोलोजिकल कणबाट निर्माण गरिएको बताइएको छ । वैज्ञानिकहरुले यसलाई सार्स–कोभ २ नाम दिएका छन् । यो औषधि परीक्षणका क्रममा मुसा र ह्याम्स्टर्समा प्रभावकारी भएको बताइएको छ । समाचारका अनुसार यो औषधिले बिरामी निको हुनुका साथै पछि कोरोना संक्रमण नहुने पनि जनाइएको छ ।
युनिभर्सिटी अफ टेक्सस मेडिकल ब्रान्च सेन्टर फर बायो डिफेन्स एण्ड इमर्जिङ डिजिजेस र गालभेस्टन नेशनल ल्याब्रोटरीका प्रतिनिधिहरुले मुसामा यो औषधिको परीक्षण गर्दा मुसामा सेल्स भाइरस प्रवेश गर्न नदिएको बताएका छन् ।
यो औषधि कहिलेदेखि सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध हुनेछ भन्नेबारेमा भने अझै खुलाइएको छैन ।